Isipiliyoni Sami Sokuthenga 2 se-Apple Watch | Ngivela kwa-mac
Isipiliyoni sami sokuthenga se-Apple Watch Series 2
Kufakiwe | | I-Apple Watch
Phakathi namasonto andulela inkulumo yosuku, angizange ngiyeke ukuphawula ngamahemuhemu nokuvuza kwewashi le-apula. Sithe kuzoba ne-GPS ne-barometer, phakathi kwezinye izinto. Okungaba mncane futhi kube namandla, nebhethri eliningi njll. Ezinye izinto kuvele ukuthi ziyiqiniso kanti ezinye akunjalo, okwamanje. Abanye abafundi be-Applelizados baphawule noma bangibhalele nakwi-akhawunti yami yeTwitter (@josekopero) bangitshele ukuthi ngizitike futhi bangikhuthaze ukuthi ngithenge. Bengingaqiniseki, kepha bengifuna ngempela. Lapho kufika ingqikithi ngazizwa ngiphoxekile kancane, Bengilindele okungaphezulu. Ngiphinde ngangena kuwebhu ngesikhathi ibuyekezwa ukuyigcina. Phakathi kokukhuphuka kwentengo nokuhlelwa kabusha kwekhathalogi, ngangicasukile futhi nginqume ukungakwenzi.
Yilapho ngenqabile ukuyithenga ngaqala ngabeka izizathu zokungayithengi. Labo basebenzisi abangayisebenzisa ngempela, yebo, banconywe ngokuphelele. Kepha kukodwa, i-Apple Watch iyisifiso, iwashi elihle, futhi isesekeli semfashini nesibizayo. Hhayi-ke, lutho, engiziqinisekisile ukuthi ngiyitholile futhi Ngizokutshela ngokuhlangenwe nakho kwanamuhla nge-Apple Store lapho uyithenga. Ukulalelisisa kakhulu.
1 Inkinga ye-Apple Watch ongayikhetha
2 Imininingwane nokuvelele kokuthengiselana
Inkinga ye-Apple Watch ongayikhetha
Engikukhethayo kwakucacile. Cishe i-aluminium yethoni yesiliva emhlophe, usayizi ongu-42mm Isongo lalenziwe nge-silicone, yize wayengakasithathi isinqumo ngombala noma i-Series azoyithenga. Ngenxa yezindaba ezalethwa uchungechunge 2, mhlawumbe bekungelula ukuthi ngisebenzise lezo € 100 ezengeziwe kodwa… yintsha. Enye ine-processor-core futhi, kepha indala enesigqoko esisha.
Futhi mina, engazi ngezindaba ze-Apple ngekhanda, angikwazanga ukukhetha imodeli ebingeyona entsha sha, ukuze ngingazizwa nginecala kamuva. Lokhu bengikutshela namhlanje mayelana ne- Isu lika-Apple "lama-euro ayikhulu ngaphezulu", futhi "kahle, ngoba sichithe ...". Ekugcineni, phakathi kwezinye izinto nezinye ngikhethe okusha, noma kunjalo Ngangesaba ukuthi ngeke isatholakala ku-Apple yaseMurcia. Ngicabange ukuthi: uma ikhona, ngizoyithenga leyo, futhi uma ingekho, ngibe sengikhetha leyo ene- € 100 elingaphansi, i-Series 1, nokuthi ngiyazisindisa.
Ngempela, bekungukuthi, umbala nosayizi ebengikufuna. Intengo yokugcina i- € 469, kungabi ngaphezulu noma eyodwa ngaphansi.
Imininingwane nokuvelele kokuthengiselana
Iwaranti? Iminyaka emibili. Abangitshelanga lutho nge-Apple Care noma izindaba ezixakile. Iminyaka emibili nesikhathi, yebo, ukudumala kuza kubhande. Ngikhethe emhlophe, kwabonakala ngathi yinhle kakhulu futhi yebo, kunjalo. Inkinga ukuthi lokhu kunguyebo noma yebo. Azikuvumeli ukuthi ukhethe enye ngesikhathi sokuthenga. Uma ufuna okuningi, ungathenga ngokwehlukana.
Naphezu kwakho konke, kube yinto enhle kakhulu yokuthenga. Akukhona okokuqala, kuwumkhuba wethu ukuthi siye esitolo siyothatha okuthile sikuvule khona lapho. Njengoba kwakuyi-Apple Watch yami yokuqala, kwakudingeka bangichazele konke, yize ngangivele ngilungele ngokwemfundiso yohlelo lokusebenza kanye nezinto ezintsha zalo. Ngiyalivula ibhokisi, ngiyalikhipha ngiligqoke. Iyanethezeka, iphephile, iyathandeka. Ngemizuzwana nje kube sengathi ubehlale eyigqoka. Akubonakali njengokuthile okubucayi kimi, kepha kuyinto enhle nenghle engiyigqoka esihlakaleni sami.
Isisebenzi esasikhona kimi sasinamahlaya amaningi futhi sasinhle kakhulu. Lokhu kujwayelekile eSitolo se-Apple. Bazi kahle kakhulu ukuthi bangakwenza kanjani uzizwe kahle ngenkathi ulapho., futhi ungacabangi okungalungile. Uqale wangibuza ngemodeli engiyifunayo, ngamtshela yona emhlophe. "Ah, ukunambitheka okuhle kakhulu, yilokho enginakho," esho ngenkathi ephakamisa isihlakala sakhe. Njengoba okwakho bekuyisizukulwane sokuqala, siqhathanise isikrini nezinye izinto. Futhi kufanele ngisho ukuthi kukhombisa okuningi.
Ngabe ngincoma i-Apple Watch Series 2 manje? Uma ufuna ngempela, yebo, uma cha, cha. Kulula njengalokho. Ngemininingwane eminingi nemininingwane bheka okunye okuthunyelwe mayelana newashi. Ngiyabonga ngesikhuthazo salabo abangilandelayo nababhala ku-Twitter kanye nokubingelela kubo bonke abafundi be-Applelizados.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Isipiliyoni sami sokuthenga se-Apple Watch Series 2
Ungayisebenzisa kanjani i-Control Center entsha ku-iOS 10 (II)